Tranga fizahana fizahan-tany Martinique momba ny coronavirus COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Tranga fizahana fizahan-tany Martinique momba ny coronavirus COVID-19
The Fizahan-tany Martinique Ny manampahefana, ny Port of Martinique, ary ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Martinique dia manara-maso akaiky ny toerana nidiran'ny nosy hisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus COVID-19 sy hiantohana ny fiarovana ny mponina sy ny mpitsidika azy.
Ny mpandeha fitsangantsanganana an-tsambo rehetra dia arahi-maso. Anchorage, ho tonga eny amoron-dranomasina ho an'ny sambo rendrarendra kely kokoa, dia tsy avela intsony. Tsy maintsy mandeha any amin'ny tobin'ny seranan-tsambo izy ireo hijerena ny masoivohom-paritry ny fahasalamana any Martinique. Ny protokol fiarovana dia apetraka ary ampiharina amin'ny marinas sy seranana kely rehetra.
Hopitaly lehibe an'i Martinique dia vonona amin'ny fiovana rehetra amin'ity krizy ara-pahasalamana ity, ireo singa mitoka-monina ary manitatra ny fahaizany mandinika
Tamin'ny 11 martsa, tranga 4 voamarina amin'ny COVID-19 no nambaran'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamam-paritra (ARS) tany Martinique. Ireo tranga 4 ireo dia mitoka-monina ao amin'ny Hopitaly CHU Martinique, La Meynard, ao amin'ny sampana quarantine manokana sy voaro.
South Africa Airways: Safidy fitsangatsanganana noho ny coronavirus COVID-19
Hangatsiaka ary miandry! Ny fizahan-tany dia ivon-toeran'ny Emergency Coronavirus manerantany